Dadka isticmaala iOS 10 waxay ka cabanayaan inay xanibeen aqoonsigooda Apple | Wararka IPhone
Dadka isticmaala iOS 10 waxay ka cabanayaan in la xannibay aqoonsigooda Apple
Wararka IPad | | iCloud, macruufka 10
Waxaan ku celinaynaa ad nauseam: tijaabinta Beta micnaheedu waa aqbalida inaad la kulmi doonto guuldarooyin, xitaa inaad waayi karto macluumaadka aaladdaada. In kasta oo Betas aysan xumaan haba yaraatee, anigu shaqsi ahaan waan u xaqiijin karaa, waa in aan waligood lagu rakibin aaladahaaga muhiimka ah, xitaa xitaa Beta Dadweynaha. Ma jiraan wax ka fiican tusaalaha dhabta ah si loo ogaado halista aan kuu sheegeyno ee ku saabsan isku dayga Beta: isticmaaleyaal fara badan oo wata iOS 10 oo ku rakiban iPhone ama ipad waxay ka cabanayaan in la xannibay aqoonsigooda Apple iyaga oo aan siin fursad ay ku xalliyaan dhibaatada.
Waxay umuuqataa inay xiriir la leedahay xaqiijinta laba-talaabo ama xaqiijinta laba qodob. Waqtigan xaadirka ah dhammaan adeegsadayaasha dhibaatadan leh mid ka mid ah labadii nidaam ee amniga ayaa hawlgalay. La xiriirida Apple taageerada ma helin wax jawaab ah, waxayna u muuqataa in Apple ay ka shaqeyneyso sidii loo ogaan lahaa dhibaatada jirta iyo xalka loo heli karo. Lama oga waqtigaan in dhibaatadu kujirto nidaamka qalliinka ee qalabka, ama inay dhibaato ku tahay server-yada masuulka ka ah nidaamyada amniga ee Apple. Sababtoo ah waa cillad aan kala sooc lahayn oo aan ku dhicin dhammaan isticmaaleyaasha waxna ma sahlayaan.
Waqtigaan la joogo waxay umuuqataa inaysan jirin wax xal ah, in kastoo hadaad ku xanuunsaneyso fashilkaas aad fiirin karto qodobkaan aan ku sharaxeyno sida dib loogu helo aqoonsigaaga Apple ee qufulan. Waxay noqon kartaa in Apple ay xalka heshay oo xitaa looma baahna in la bilaabo cusbooneysiin cusubWaxaan horeyba u isticmaalnay in cayayaankaan si toos ah loogu xalliyo server-yadooda iyada oo aan la taabanin qalabkeena gabi ahaanba. Haddii aad dhibaato ka haysato dhibaatada, samir, iyo haddii aadan weli rakibin iOS 10 Beta, ka fikir laba jeer kahor intaadan sameynin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » iCloud » Dadka isticmaala iOS 10 waxay ka cabanayaan in la xannibay aqoonsigooda Apple
Maskaxda daruurta dijo
IOS 10 wali ma soo bixin. Waa inaad bedeshaa cinwaanka oo aad dhigtaa IOS 10 beta.
Kajawaab Cloud Mind
Waxaan rakibey macruufka 10 waxaanan ka qoomameynayaa helitaanku inuu gaabis yahay waxaanan u maleynayaa waxa dhici doona haddii badhanka guriga waxyeelleeyo. Kuma talinayo in la cusbooneysiiyo xilligan